Snapdragon 855: processeur 7nm voalohany an'ny Qualcomm misy 5G | Androidsis
Snapdragon 855 izao dia ofisialy: ny processeur vaovao ho an'ny avo lenta
Amin'ny faran'ny volana novambra dia nivoaka ny vaovao, antenaina fa Qualcomm hivoaka ny processeur vaovao ho an'ny avo lenta ofisialy amin'ny 4 Desambra. Farany dia tonga ny andro ary nisy izany. Taorian'ny famoahana maromaro nandritra ny tontolo andro omaly, tamin'ny alina Natolotra tamin'ny fomba ofisialy Snapdragon 855 izy io. Izy io no processeur avo lenta vaovao an'ny marika, izay hanjaka amin'ity sehatra tsena ity amin'ny Android amin'ny taona 2019.
Snapdragon 855 dia misongadina amin'ny fitondrana fanatsarana isan-karazany mihoatra ny teo alohany. Qualcomm dia mamela antsika amina processeur matanjaka, miaraka amina fisian-tsaina artifisialy sy fianarana milina ary mitady hihoatra ny mpifaninana aminy amin'ny lafiny rehetra izy. Mahazo izany?
Manaraka tanteraka, satria ity puce vaovao avy any Qualcomm ity dia efa miala amin'ny fahatsapana tsara ary toa mihoatra Exynos 9820 y Kirin 980 raha resaka fampisehoana no resahina. Ka ny Android amin'ny faran'ny taona ho avy dia hanana processeur matanjaka miaraka amina zavatra maro azo atao.
Snapdragon 855: Namboarina tamin'ny 7nm ary misy fanatsarana AI
Satria efa navoaka tamin'ny tranga teo aloha, ary farany naseho tamin'ny fampisehoana nataony, Snapdragon 855 no mpikirakira voalohany novokarin'i Qualcomm tao anatin'ny 7 nm. Miatrika processeur iray izahay izay mifantoka amin'ny fitantanana asa ho an'ny faharanitan-tsaina artifisialy. Amin'io lafiny io dia nampanantenaina ny tanjaka telo heny, noho ny fampidirana ireo algorithma momba ny sary computational. Araka ny efa nampoizina dia manana tarika NPU izy amin'ny fitantanana ireo laharam-pitsikilovana artifisialy ireo.
Ity dia iray amin'ireo fironana eo amin'ny tsena, miaraka amin'izany te hanana fakantsary faran'izay tsara izy ireo, miaraka amin'ny lanjany lehibe kokoa amin'ny rindrambaiko noho ny momba ny fitaovana. Midika izany fa ny algorithman dia ampidirina ahazoana maka maody fakana sary fanampiny. Ohatra, ny maody fakantsary ao amin'ny Pixel dia manana an'ity karazana algorithms ity, izay mamela ny famahana ny seho sarotra.
Amin'ny lafiny sary, ny Snapdragon 855 koa dia miavaka, tsy mahagaga. Qualcomm endri-javatra amin'ny GPU izay antsoin'izy ireo hoe Elite Gaming, izay mifantoka amin'ny lalao. Mba hanaovana izany, ny fanatsarana izay toa mampatsiahy ny GPU Turbo dia ampidirina amin'ny telefaona Huawei. Na dia tsy nanome antsipiriany momba ireo toetra ireo aza ny marika amin'izao fotoana izao. Amin'ity tranga ity dia mampiasa Adreno 640 GPU ilay mpanera, izay mety amin'ny filalaovana.
Lafiny iray hafa mampiavaka ity mpikirakira ity amin'ny fampidirana ny fanohanana ny mpamaky tanan-tondro ultrasonika ao ambanin'ny efijery. Endri-javatra izay ahitantsika maodely maro dia maro amin'ny sehatra avo. Amin'izany no hananan'izy ireo an'ity fanohanana ity amin'ny taona 2019, taona iray izay antenaina hahitantsika ity fampiasa ity amin'ny fahita matetika amin'ny telefaona finday avo lenta amin'ny Android. Noho io fanohanana io dia azo inoana fa ho hitantsika matetika io fisehoana io.
Misy koa vaovao manandanja amin'ny fifandraisana. Satria Snapdragon 855 no voalohany manana modem X50, misaotra an'izay manohana / hamela ny fifandraisana 5G amin'ny mpampiasa. Amin'izany fomba izany, ny processeur dia lasa voalohany eny an-tsena manolotra fanampiana 5G. Raha heverina fa ny telefaona misy fanohanana 5G dia antenaina ho tonga amin'ny tapany voalohan'ny taona ho avy, tsy hahagaga raha mampiasa an'ity processeur ity ny ankamaroan'izy ireo.
Momba ny fanjifana bateria dia tsy nisy voalaza amin'ny famelabelarana. Na dia ny processeur vaovao vita amin'ny 7 nm aza matetika dia tonga miaraka amin'ny fanjifana bateria ambany kokoa. Noho izany dia hamela ireo mpampiasa manana maodely Android avo lenta hanana fampiasana mahomby kokoa. Tsy misy isalasalana, tombony azo raisina.
Ny famokarana ny Snapdragon 855 dia antenaina hanomboka tsy ho ela. Tena mety ho amin'ny MWC 2019 mihaona amin'ireo telefaona voalohany izahay ny tsena izay mampiasa ity processeur vaovao Qualcomm ity. Ahoana ny hevitrao momba ny processeur?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Snapdragon 855 izao dia ofisialy: ny processeur vaovao ho an'ny avo lenta
Huawei dia mikasa ny handefa fitaovana 200 tapitrisa manerantany amin'ny taona ho avy
Ahoana no hahalalanao raha tonga ny fotoana hanovana telefaona Android